देशको विविधताले सङ्घीयताको माग गरेको हो : मन्त्री त्रिपाठी « Nepal'S Largest Digital Online Newspaper (Magazine)
एउटै सरकारको पालामा संविधानमा समावेश भएका सबै कुरा पूरा हुन नसक्ने धारणा राख्नुहुने सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री हृदयेश त्रिपाठी अहिलेसम्मको स्थितिलाई समीक्षा गर्दै विरक्त हुनुपर्ने स्थिति नरहेको बताउनुहुन्छ । उहाँ निजामती सेवा विधेयक संसदको आगामी अधिवेशनबाट पारित हुनेमा आशावादी देखिनुहुन्छ । राज्य पुनःसंरचनालाई भौगोलिक पुनःसंरचनाको रुपमा मात्रै हेर्न पुग्दा समस्या उब्जिएको ठान्नुहुने मन्त्री त्रिपाठीसँग संविधान दिवसका सन्दर्भमा रासस समाचारदाता नारायण ढुङ्गानाले गरेका कुराकानीको सारसङ्क्षेप यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।
संविधानको अनुसूचीमा तीन तहको अधिकार क्षेत्र स्पष्ट रुपमा उल्लेख छ तर, अधिकार क्षेत्र र स्रोत साधनको बाँडफाँडमा विवाद कायमै छ । प्रदेशले मुद्दा हाल्ने अवस्था आउनुले सङ्घीयता कार्यान्वयनमा जटिलता देखापरेको दशाउँदैन ?
– पहिलो पटक सङ्घीयताको अभ्यासमा गएको मुलुकमा यस प्रकारका मुद्दा, मामिला, माग, आग्रह राख्नु स्वाभाविक नै हो, सङ्घीयताको सौन्दर्य नै यही विविधता हो । सयकडौँ कानून एकमुष्ट रुपले संसदबाट पारित गरिसकिएको छ । कतिपय कानून बन्ने प्रक्रियामा छ । हामी यो नबिर्सौँ कि स्थानीय तहको निर्वाचन हुने बखतसम्म स्थानीय तहको काम, कर्तव्य र अधिकारलाई परिभाषित गर्ने कुनै कानून थिएन । संविधानले खाका मात्रै दिएको थियो । निर्वाचन भइसकेपछि बल्ल कानून बन्न थाले । अझ पनि कतिपय कानून प्रक्रिया मै छ । सङ्घीयताको आधार भनेको संविधानले नै उल्लेख गरेको छ – सहभागिता, समन्वय र सहअस्तित्व । के कुरा बुझ्नुपर्छ भने विभिन्न राज्य मिलेर अमेरिका बनेको जस्तो पनि होइन । हिस्दुस्तानको पनि विभिन्न सङ्घीय अभ्यास ब्रिटिस कालमै भइसकेको थियो । सन् १९३०÷३४ मै त्यहाँ प्रान्तीय संरचना निर्माण भइसकेका थिए । हामी कहाँ फरक के छ भने केन्द्रीय शासनलाई सङ्घीयतामा रुपान्तरण गरिएको हो । यो प्रान्तीय वा प्रादेशिक शासनलाई सङ्घीयतामा परिवर्तन गरेको होइन, केन्द्रलाई नै हामीले परिवर्तन गरेका हौं । यो मूलभूत सिद्धान्त बुझे मात्रै सङ्घीयता बुझिन्छ । शाश्वत विश्वव्यापी सिद्धान्त, स्वशासन र साझेदारी शासन हामीले स्वीकार गरेको अवस्था हो । साझेदारी शासन पनि छ । आफ्नो संरचनामा स्वशासन पनि छ ।
– सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरिसकेपछि र माननीय सदस्यहरुले संशोधन गरिसकेपछि संसदले सम्बन्धित समितिमा पठाएको अवस्था हो । समितिबाट पारित हुन बाँकी छ । आउँदो संसद अधिवेशनबाट पारित हुन्छ । त्यसले अहिलेको निजामती सेवालाई एक ढङ्गले व्यवस्थित गर्छ । सङ्घीयताको सबै सिद्धान्तलाई स्वीकार गर्छ । त्यो निर्माण भएपछि कानूनअनुसार निर्देशित हुन्छ र व्यवस्थित रुपमा अघि बढ्ने आधार खडा हुन्छ । कर्मचारी समायोजनको कुरा निकै पेचिलो बन्यो । त्यसले अझै पूर्णता पाउन सकेको देखिँदैन ।
खासमा व्यवधान के हो र कहाँनेर छ ?
प्रहरी र सेनामा भर्ती, आर्थिक व्यवस्थापनलगायतका कुरामा स्वायत्तता दिने विषय पनि गम्भीर रुपमा उठिरहेको छ । स्वायत्तता आवश्यक हो ?
प्रकाशित मिति : आश्विन १, २०७७ बिहीबार ३ : ३० बजे